1 Makoronike 25:1-31
25 Dhavhidhi nevakuru+ vemapoka ebasa+ vakatsaurawo vamwe vanakomana vaAsafi, Hemani+ naJedhutuni,+ vaya vaiprofita noudimbwa,+ nezviridzwa zvine tambo,+ nemakwakwakwa esimbi,+ kuti vaite basa. Machinda ebasa ravo akabva pana ivava. 2 Pavanakomana vaAsafi paiva naZakuri naJosefa+ naNetaniya naAsharera,+ vanakomana vaAsafi vaitarisirwa naAsafi+ uya aiprofita achitarisirwa namambo. 3 VaJedhutuni:+ vanakomana vaJedhutuni vaiva Gedhariya+ naZerai+ naJeshaya,+ naShimei, Hashabhiya naMatitiya,+ vari vatanhatu, vaitarisirwa nababa vavo Jedhutuni, aiprofita norudimbwa rwokuonga nokurumbidza narwo Jehovha.+ 4 VaHemani:+ vanakomana vaHemani vaiva Bhukiya,+ Mataniya,+ Uzieri,+ Shebhueri naJerimoti, Hananiya,+ Hananai, Eriyata,+ Gidhariti+ naRomamti-ezeri,+ Joshbhekasha,+ Maroti,+ Hotiri,+ Mahaziyoti. 5 Ava vose vaiva vanakomana vaHemani, muoni+ wamambo wezvinhu zvaMwari wechokwadi kuti amupe simba; nokudaro Mwari wechokwadi akapa Hemani vanakomana gumi nevana nevanasikana vatatu.+ 6 Ava vose vaitarisirwa nababa vavo pakuimba paimba yaJehovha, vaine makwakwakwa esimbi,+ zviridzwa zvine tambo+ noudimbwa+ nokuda kwebasa reimba yaMwari wechokwadi. Asafi naJedhutuni naHemani ndivo vaitarisirwa namambo.+ 7 Vose pamwe chete nehama dzavo dzakanga dzakarovedzwa kuimbira Jehovha,+ vose vari nyanzvi,+ vaiva mazana maviri nemakumi masere nevasere. 8 Naizvozvo vakakanda mijenya+ pamusoro pezvinhu zvaifanira kutarisirwa, vaduku vachiitirwa zvakangofanana nevakuru,+ nyanzvi+ pamwe chete nomudzidzi. 9 Zvino mujenya wakakandwa: wokutanga waAsafi wakabata Josefa,+ wechipiri Gedhariya+ (iye nehama dzake nevanakomana vake vaiva gumi nevaviri); 10 wechitatu Zakuri,+ vanakomana vake nehama dzake, gumi nevaviri; 11 wechina Izri,+ vanakomana vake nehama dzake, gumi nevaviri; 12 wechishanu Netaniya,+ vanakomana vake nehama dzake, gumi nevaviri; 13 wechitanhatu Bhukiya, vanakomana vake nehama dzake, gumi nevaviri; 14 wechinomwe Jesharera,+ vanakomana vake nehama dzake, gumi nevaviri; 15 wechisere Jeshaya, vanakomana vake nehama dzake, gumi nevaviri; 16 wechipfumbamwe Mataniya, vanakomana vake nehama dzake, gumi nevaviri; 17 wechigumi Shimei, vanakomana vake nehama dzake, gumi nevaviri; 18 wechigumi nomumwe chete Azareri,+ vanakomana vake nehama dzake, gumi nevaviri; 19 wechigumi nemiviri Hashabhiya, vanakomana vake nehama dzake, gumi nevaviri; 20 wechigumi nemitatu, Shubhaeri,+ vanakomana vake nehama dzake, gumi nevaviri; 21 wechigumi nemina, Matitiya, vanakomana vake nehama dzake, gumi nevaviri; 22 wechigumi nemishanu, Jeremoti, vanakomana vake nehama dzake, gumi nevaviri; 23 wechigumi nemitanhatu, Hananiya, vanakomana vake nehama dzake, gumi nevaviri; 24 wechigumi neminomwe, Joshbhekasha, vanakomana vake nehama dzake, gumi nevaviri; 25 wechigumi nemisere, Hananai, vanakomana vake nehama dzake, gumi nevaviri; 26 wechigumi nemipfumbamwe, Maroti, vanakomana vake nehama dzake, gumi nevaviri; 27 wechimakumi maviri, Eriyata, vanakomana vake nehama dzake, gumi nevaviri; 28 wechimakumi maviri nomumwe chete, Hotiri, vanakomana vake nehama dzake, gumi nevaviri; 29 wechimakumi maviri nemiviri, Gidhariti, vanakomana vake nehama dzake, gumi nevaviri; 30 wechimakumi maviri nemitatu, Mahaziyoti,+ vanakomana vake nehama dzake, gumi nevaviri; 31 wechimakumi maviri nemina, Romamti-ezeri,+ vanakomana vake nehama dzake, gumi nevaviri.